“MBOLA LAVITRA !” -
AccueilTresaka“MBOLA LAVITRA !”
29/11/2016 admintriatra Tresaka 0
Sahirana amin’ny fitadiavana sy ny asa fivelomana ny Malagasy manomboka ny alatsinainy hatramin’ny sabotsy. Ny alahady vao mba afaka miaraka amin’ny fianakaviana sy ny vady aman-janaka, manararaotra maka rivotra mivoaka kely ivelan’ny renivohitra. Amin’io fotoana io koa no ahafahana miray latabatra na an-trano na any amin’ireny trano fisakafoana ireny.
Milaza miara-mahita angamba isika fa tena sarotra ny mitady trano fisakafoana rehefa alahady. Mikatona avokoa ny ankamaroany hatramin’ireo heverina ho matihanina aza, indrindra ireo tantanin’ny gasy. Sanatria tsy manambany ny gasy akory raha milaza izany fa izay no zava-misy. “Mbola lavitra e!”. Misokatra daholo anefa ny ankamaroan’ireo tantanin’ny vahiny, ny Karana ary ny Sinoa satria fantatr’izy ireo tsara fa mandeha be ny tsena ary maro ireo olona mitondra ny ankohonany miala amin’ny rotoroto andavanandro rehefa alahady.
Mahavariana aza indraindray fa ny “patron” mihitsy no miditra an-tsehatra mikarakara ny sakafo, mandray ny mpanjifa any amin’ireny trano fisakafoana tantanin’ny vahiny sy ny Karana ary ny Sinoa ireny ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Dia ho gaga ve isika raha lavitra ny elanelana misy eo amin’ny mpandraharaha gasy sy vahiny? Tena tsy mitsahatra miasa ny vahiny na andro na alina na andro fety. Ry zareo Sinoa izany moa efatra ora ao anatin’ny 24 ora sisa no matory.
Afaka mividy fahitalavitra amin’ny roa maraina ohatra any Singapour satria misokatra avokoa ireo magazay lehibe, mahita trano fisakafoana misokatra mandritra ny 24 ora. Izany hoe, tsy mijanona fa mihodina hatrany ny seha-pamokarana rehetra koa tsy mahagaga raha mihazakazaka be ny lafiny ara-toekarena. Tsy tonga amin’izao toerana misy azy izao i Sina raha tsy nifehy fehikibo niasa mafy ny vahoakany ary mafy lavitra noho ny zava-misy iainantsika ny nanjo ny Sinoa tamin’ny fotoana nananganan’izy ireo ny fireneny. “Mbola lavitra” ny lalantsika e!